Kac Kooxda Street — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Kac Kooxda Street
Hey guys! My buugga Kaca waxaa sii daayo on January 27 (todobaadka soo socda!) oo waxaan u baahanahay kaalmadaada.
Waxaan raadineyso weeyna dadka ka caawin kartaa qayb ka mid ah Kooxda Street ahaan iyo caawin noo faafin erayga ku saabsan buugga online oo ay warbaahinta bulshada.
Waxaad ka eegi kartaa badan oo ku saabsan buugga at http://RiseBook.tv
Ducadaydu waxay tahay in Ilaahay kitaabkan qaato oo farriintiisa uga faa’iidaysto inuu jiilkayaga ku baraarujiyo inay kacaan oo noolaadaan. Oo waxaad naga caawin kartaa faafin fariin in ay kor u saxiixay in ay qayb ka mid ah Kooxda Street our buug noqon.
Halkan sida ay u shaqeyn doonaan ...
1 – Codso HALKAN.
Noo sheeg dheeraad ah oo adiga kugu saabsan, sababta aad u rabto in aad qayb ka mid ah kooxda ahaan, oo aad la wadaagto warbaahinta bulshada iyo links kale online nala.
My publisher dib u eegi doona codsigaaga iyo haddii doortay…
2 – Read nuqul dardaaranka kitaabka.
Waxay kuu soo diri doonaa nuqul PDF kitaabka ah in uu akhriyo.
3 – Ku biir ah Facebook Group gaarka ah.
Waxaad ka heli doontaa martiqaad si ay ugu biiraan a Facebook Group gaarka ah ka publisher. Waxaa, waxaad heli doontaa tan ah ee content u weyn in la wadaag saaxiibadaada. Waxaa jira qaar ka mid ah waxyaalaha waaweyn oo ka dhacaya agagaarka daayo in aad rabto in aad doonaa in la ogaado oo ku saabsan.
Waxaan in kooxda arbushin laga yaabaa in dhawr jeer, aad!
4 – Soor Ereyga!
All aan ku weydiino beddelkeeda nuqul ah ka hor waa in aad faafin lahaa erayga saaxiibbadaa iyo sidoo kale dhajinta eegista daacad ah kitaabka marka aad fursad u heli lahaa in aad iska baarto.
run ahaantii aan rumeyn Quraankan oo Ilaah u barya in ay dhiirrin doona AAD iyo kuwa kale si ay u noqdaan jeedo in ujeeddada Ilaahay noloshooda. Bal aan ka bilowno dhaqdhaqaaq. Waxaa bilaabi kartaa in aad la.
TaylorBradian • January 20, 2015 at 10:16 waxaan ahay • Reply
Anigu waxaan ahay 21 sano jir mu'min ah oo ah hal aabbe si qurux badan 16 gabar yar bil. Waxaan sidoo kale u adeegaa sidii wakiilka ballan-qaadka ee farshaxannada Christian Hip Hop. Sidoo kale waxaan ahay sare, dugsiga hoose dhexe (Ingiriis), Jaamacadda Campbell ee Waqooyiga Carolina. Daacadii, farriinta Masiixu waxay igu soo dhacday si cusub, sanado ka dib markii ugu horeysay ee la i baray Christian Hip Hop. Injiilka waxaa loo soo bandhigay si aan u fahmi karo, la wadaag asxaabtayda. Dhowr sano ka dib, Waxaan fursad u helnay inaan safar ku keeno magaaladayda Sanford, NC, halkaas oo uu ku lahaa joogsiga dalxiiska ee Buuga Nolosha Wanaagsan. Waxay ahayd wax cajiib ah in la arko jawaabta ay dadka kale heleen, Markay injiilka maqleen oo ay fahmeen markii ugu horraysay. Aad baan ugu faraxsanaan lahaa inaan gacan dheeraad ah ka noqdo faafinta ereyga ku saabsan buuggan cusub ee Safarka. Dadku waxay u baahan yihiin inay injiilka ku maqlaan macnahooda si ay u fahmaan. Sida Safarku ku sameeyay buugiisii ​​ugu horeeyay, Waxaan rajeynayaa inaan akhriyo, dib u eegis, iyo la wadaaga sheekadiisa wax ku oolka ah iyo kuwa lala xiriirin karo. Waxaan nasiib u yeeshay inaan helo rajo sannado ka dib, taasi way ila jiri doontaa weligeed. Waxaan rabaa in kuwa kale ay helaan rajo la mid ah, waxaanan ku kalsoonahay in Safarku si cad oo kooban ugu soo bandhigay rajadan buugiisa cusub. Waad ku mahadsan tahay waqtigaaga akhrinta kan, waxaana rajeynayaa inaan sii caawino fariintan aan dhammaanteen aad ugu baahanahay. Aan wada kacno!
David • January 21, 2015 at 10:22 pm • Reply
Waad ku mahadsan tahay soooooo fursadan cajiibka ah si aad uga caawiso faafinta warka buuggaaga!! Ma sugi karo 27-ka!!!
David • March 29, 2015 at 5:13 pm • Reply
Weligay lama soo dooran:(xD